Enda kuSaudi Arabia kuKushanya kana Iwe Wakavharirwa
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Trending Now » Enda kuSaudi Arabia kuKushanya kana Iwe Wakavharirwa
avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • Nhau Dzakanaka • nhau • Kutarisirwa • Saudi Arabia Kuputsa Nhau • ushanyi • Tourism Kutaura • Trending Now • Akasiyana Nhau
Saudi Arabia ichavhurazve miganhu yayo kuvashanyi vekunze kubva 1 Nyamavhuvhu 2021. Vashanyi vanobva kunyika makumi mana nenomwe vachakwanisa kuongorora Humambo hweSaudi Arabia, kana vakabaiwa zvakakwana.
Saudi Arabia yakaderedza miganho yemuganhu zvichitevera iko kukandwa kwe COVID-19 yepasirese.
Vagari vanobva kunyika makumi mana nepfumbamwe vanokodzera e-visa yekushanya.
Sangano reWorld Tourism Network rakakorokotedza Humambo nekuvhura magedhi avo kune nyika yekushanya kwenyika dzese.
Saudi Arabia parizvino iri kuisa mabhiriyoni muindasitiri yekufamba neyekushanya, kwete kuSaudi Arabia chete asi mukuva muzinda wepasirese wepasi rese wevatungamiriri vezvekushanya kuti vauye pamwechete vagadzire maitiro.
Kubva muna Nyamavhuvhu 1, mari iyi ichatanga kuunza mari zvakare kuhumambo, apo vagari vanobva munyika makumi mana nenomwe vanokokwa kushanyira nyika nyowani.
Muhurukuro ichangoburwa yakarongwa nechinyorwa chino ne Saudi Arabia chitsauko cheWorld Tourism Network, yakanongedzerwa: Saudi Arabia ine hurongwa hukuru uye maakaundi atove nezvakakura kwazvo zvekuita kwete kungoisa Humambo munzvimbo yepasirese yekushanya asi kugadzira nzvimbo yechokwadi yekuunganidza kune avo vanotungamira kushanya kwenyika.
Wake Royal Highness Dr. Abdulaziz Bin Naser Al Saud, Sachigaro weWTN Saudi Arabia Chitsauko, akataura iyo Saudi Arabia inobata makuru ekufambisa uye ekushanya masangano nemasangano, kusanganisira iyo World Tourism Organisation (UNWTO), World Travel uye Tourism Council (WTTC), uye Global Tourism Resilience uye Crisis Management Center (GTRCMC).
Mamiriro acho: Vashanyi vanoda kuenda kuHumambo hweSaudi Arabia vanofanirwa kubaiwa zvakakwana.
Tourism visa varidzi vakabaiwa jekiseni kuzorwa COVID-19 vachakwanisa kupinda munyika kubva Nyamavhuvhu 1, 2021, pasina chikonzero chekuisa wega. Vafambi vanofanirwa kupa humbowo hwakazara kosi yeimwe yechina majekiseni anozivikanwa parizvino: 4 madosi eOxford / Astra Zeneca, Pfizer / BioNTech, kana majekiseni eModerna kana imwe chete jekiseni remushonga wakaburitswa naJohnson & Johnson.
Vafambi vakapedza maviri madhizaini eSinopharm kana Sinovac majekiseni anozogamuchirwa kana vakagamuchira imwe dosi yeimwe ye4 majekiseni anotenderwa muHumambo.
Saudi Arabia yakavhura webhu portal pa https://muqeem.sa/#/vaccine-registration/home kuti vashanyi vanyorese yavo yekudzivirira. Nzvimbo iyi inowanikwa muchiArabic neChirungu.
Kugara vafambi, Saudi Arabia yakavandudza Tawakkalna, iyo nyika-inopa mubairo, uye kuteedzera app, kubvumira vashanyi venguva pfupi kuti vanyore nemazita epasipoti. Tawwakalna inodikanwa kuti upinde munzvimbo zhinji dzeveruzhinji muSaudi, kusanganisira zvitoro, mabhaisikopo, maresitorendi, uye nzvimbo dzekuvaraidza.
Chiziviso ichi chinouya ingangoita mwedzi gumi nemasere mushure mekushanyirwa kwenyika kuSaudi Arabia nekuda kwechirwere cheCOVID-19. Saudi Arabia yakatanga chirongwa che e-visa chekushanya munaGunyana 2019.
"Saudi iri kutarisira kuvhura zvakare mikova yayo nemoyo kune vashanyi vekunze," akadaro Fahd Hamidaddin, CEO weSaudi Tourism Authority (STA). "Panguva yekudzima, tanga tichishanda takabatana pamwe nevatinoshanda navo munharaunda nehurumende kuti tione kuti vashanyi kuSaudi vanogona kunakidzwa nechinhu chisingakanganwiki, chechokwadi, uye, pamusoro pezvose, ruzivo rwakachengetedzeka kwavari nevavanoda. Vashanyi vanotsvaga nzvimbo dzisina kutsvakirwa dzemagariro, ruzivo rwetsika nemagariro, uye runako rwemweya rwunofema vachashamisika uye vanofara kuona kugamuchirwa kwoushamwari kweSaudi. ”
Kuziviswa kwekutangazve kwekushanya kunouya apo Saudi Arabia inotangisa mwaka wayo wezhizha wegore ra2021, ichiunza hupfumi hwezvitsva zvinokwezva nezviitiko munyika. Mushandirapamwe mutsva unotarisirwa kutora chinodikanwa chakati pakati pevanhu vekumba uye vematunhu, kunyanya pazviitiko zvakakura zvevaraidzo, zvakakanganiswa zvakanyanya nezviyero zvekudzora kupararira kwecoronavirus.
Jeddah Guta Rekare Zvivakwa neMigwagwa, Saudi Arabia
Kunyangwe hosha iyi, 2020 raive gore rekuvhuvhura indasitiri yekushanya yekuSaudi sevagari nevagari vakaongorora nyika - zhinji kekutanga - zvichigonesa kuenderera mberi kwekuvandudzwa kwemabasa uye zvigadzirwa zvitsva pamberi pekuvhurwa kwenyika dzese.
Mushandirapamwe we2020 Saudi Summer, uyo wakatanga pakati paJune naSeptember, wakakonzera kuwedzera kwe33% mumashandisirwo emahotera, maresitorendi, uye zororo uye zviitiko zvetsika zvichienzaniswa nenguva imwechete mu2019. Avhareji yekugara kwehotera yaive ingangoita 50%, iine nzvimbo yepamusoro yekugara. kune dzimwe nzvimbo dzinosvika 100%.
Saudi Arabia yakaunzawo nyika yekutanga-yekumbozorora kupa nyika pamwe neGungwa Dzvuku paSilver Spirit cruise ship, munaGunyana 2020. Cruise iri kupihwa zvakare sechikamu chemwaka weZhizha, neMSC Belissima ichishanda kunze kweJeddah pakati paChikunguru. uye Gunyana.
Iyo yakazara seti yehutano uye chengetedzo maprotocol uye kuyedzwa kwenyika kweECVID-19 yakave nechokwadi kuti kukura mukushanya hakuna kuperekedzwa nespike mune coronavirus kesi. Saudi Arabia yakanyora zvishoma pamusoro pe14,700 macoronavirus kesi pamamirioni vanhu muhuwandu, pazasi pevhareji yepasirese yemakesi 25,153 pamamirioni uye zvakanyanya pazasi penzvimbo zhinji dzepasirese nzvimbo dzekushanya.
Saudi Arabia yakabudirira kuburitsa mushonga we COVID-19 kune vese vagari uye vagari, iine anopfuura mamirioni makumi maviri nemashanu madhizaini akapihwa sa25 Chikunguru. Vanopfuura hafu yevagari vese veSaudi nevagari ikozvino vatambira pfuti yavo yekutanga uye mumwe kana vashanu vagamuchira madosi maviri emushonga.
Vese vashanyi vanozokumbirwa kuti vacherechedze matanho ekudzivirira anotenderwa nebazi rezvehutano ayo anosanganisira kupfeka chifukidzo pazere vanhu uye kuchengetedza kutenderera kwenzanga.
Vagari vanobva kunyika makumi mana nepfumbamwe vanokodzera vhiza yekushanya, iyo inogona kuchengetedzwa pa Shanyira Saudhi webhusaiti. Kune ruzivo rwepamusoro-soro rwezvinodiwa zvekupinda, kunyanya kubva kunyika dzine coronavirus itsva, vafambi vanofanira kutarisa nemutakuri wavo vasati vabhuka.